Abakhiqizi Bezikhungo Zomkhiqizo | I-China Product Center Factory & Abahlinzeki
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB yohlelo lokuzulazula lwe-GPS olusetshenziselwa i-motocycle. Imboni yezimoto inezidingo ezinzima kakhulu ngokusebenza nezinqubo, ikhwalithi nokulethwa ngesikhathi. Konke okuyizinto eziseqhulwini nasenhliziyweni yemithetho yokusebenza kwe-Asteelflash, emhlabeni wonke. Njengenkampani ye-elekthronikhi yezimoto nomakhi we-PCBA wezimoto, thina, ePandawill, siletha izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kwezobunjiniyela, ukuklama kanye neprototyping.
Inhlangano ye-PCB yethuluzi Lokuhlola Izithuthi
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wethuluzi lokuhlonza izimoto. Imboni yezimoto inezidingo ezinzima kakhulu ngokusebenza nezinqubo, ikhwalithi nokulethwa ngesikhathi. Konke okuyizinto eziseqhulwini nasenhliziyweni yemithetho yokusebenza kwe-Asteelflash, emhlabeni wonke. Njengenkampani ye-elekthronikhi yezimoto nomakhi we-PCBA wezimoto, thina, ePandawill, siletha izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kwezobunjiniyela, ukuklama kanye neprototyping.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB womkhiqizo wekhamera yezemidlalo yangaphandle. Ama-elektroniki wabathengi, kusuka kumikhiqizo yomsindo kuya kokugqokekayo, ukugembula noma iqiniso langempela, konke kuya ngokuya kuxhuma. Umhlaba wedijithali esiphila kuwo udinga izinga eliphezulu lokuxhuma ne-elekthronikhi ethuthukile namakhono, ngisho nakwemikhiqizo elula kunazo zonke, inika abasebenzisi amandla emhlabeni jikelele.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB we-Real-time telemetry esetshenziselwa izisebenzi. Ama-elektroniki wabathengi, kusuka kumikhiqizo yomsindo kuya kokugqokekayo, ukugembula noma iqiniso langempela, konke kuya ngokuya kuxhuma. Umhlaba wedijithali esiphila kuwo udinga izinga eliphezulu lokuxhuma ne-elekthronikhi ethuthukile namakhono, ngisho nakwemikhiqizo elula kunazo zonke, inika abasebenzisi amandla emhlabeni jikelele.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wohlelo lokulawula ukubonisa i-LED. Thina, ePandawill, singochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza izindlu ezihlakaniphile. Ngenxa yezimboni zethu ezihlakaniphile, onjiniyela nemishini yethu basebenzisa ukuhlaziywa kwedatha okukhulu, ukusebenzisa amafu, ubuhlakani bokufakelwa (i-AI) nokuphrinta kwe-3D ukudala amadivayisi axhumene ne-smart home.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wokulawulwa kokulawulwa kwesiginali. Imboni yezimboni ngokomlando ibiyingxenye eyodwa enkulu ebisetshenziswa yiPandawill kepha manje sesibona i-Intanethi Yezinto, ngokugxila ngqo kwi-Industrial Internet of Things (IIoT), ezoletha ukuxhumeka nokuzenzekelayo emafektri nasezinkampanini ezizungeze umhlaba.
Idivayisi yokuthola idatha ye-IoT
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wedivayisi yokuthola idatha ye-IoT. Ukusuka ezinsizakalweni zobunjiniyela nezokukhiqiza kuya kumhlangano webhodi wesifunda ophrintiwe, thina, enkampanini iPandawill EMS, siletha izixazululo zochwepheshe kumadivayisi we-Intanethi wezinto.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wedivayisi yokuphulukisa i-laser. Ukunyatheliswa kwe-ISO 13485 okuqinisekisiwe okusekela izidingo zakho zokukhiqiza kwenye yezimboni eziqinile kakhulu: amakhono wethu wezokwelapha ahlanganisa izingxenye ezahlukahlukene ezithile kusuka kwimishini yokuxilonga kuya kumadivayisi aphathwayo, kusuka kumhlangano wamabhodi wesifunda aphrintiwe (PCBA) ukuya emhlanganweni ophelile wemikhiqizo.
Ibhodi le-Ultrasound board gerd treatment